Isimo sezulu esihle, ukubukwa okuhle, i-private lap pool - I-Airbnb
Isimo sezulu esihle, ukubukwa okuhle, i-private lap pool
Atenas Canton, Alajuela, i-Costa Rica
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Charlie/Gloria
U-Charlie/Gloria Ungumbungazi ovelele
I-Casa Colibri de Atenas itholakala kalula imizuzu engama-25 ukusuka e-Juan Santamaria Int'l Airport (SJO), imizuzu engama-45 ukusuka ogwini, 1.5hrs ukusuka e-Poas Volcano, amahora angu-2 ukusuka e-Arenal Volcano kanye ne-Hot Springs, amahora angu-2 ukusuka e-Manuel Antonio, kanye namahora angu-2.5 ukusuka I-Monteverde Cloud Forest. Sitholakala enkabeni yedolobha cishe kuzo zonke izindawo ezibukwayo nemisebenzi engcono kakhulu e-Costa Rica.
Ikhaya lethu libekwe endaweni eyi-Pica Flora ngenhla kwe-Atenas. Ekuphakameni kwethu okungu-2,800', sinomiyane abambalwa kakhulu.
Ngeke udumale ngokuhlala e-Casa Colibri. I-Casa Colibri itholakala e-Atenas, imizuzu engu-25 ukusuka ku-Juan Santamaria (SJO) International Airport. Indlu yethu enezitezi ezi-2, 2bedroom, 2.5 yokugezela yesitayela sase-Balinese iyindawo ekahle yezithandani ezi-2 noma umndeni waba-4 ongayijabulela. Igumbi lokulala eliphezulu linombhede wendlovukazi kanye nombhede owodwa. Igumbi lokulala elisezingeni eliphansi linemibhede emi-2 eyodwa engaguqulwa ibe umbhede wenkosi. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda ukuhlala eduze kwechibi elinencwadi enhle ngenkathi uziphuzela e-Pina Colada yakho, noma usebenzisa ikhaya njengenkambu eyisisekelo ngenkathi uhlola amahlathi aseduze emvula/amafu, izintaba-mlilo nanoma imaphi amabhishi asezingeni lomhlaba, lokhu indawo yokuhlala.
I-Atenas yaziwa kakhulu ngokuba nesimo sezulu esingcono kakhulu emhlabeni (Nat'l Geographic). Ngenkathi i-Atenas efanele ingathola ukufudumala kancane, endaweni ephakeme ye-Casa Colibri, uzothola kokubili umswakama nomiyane kuyindlala.
Kusukela kulokhu kubhalwa, u-Atenas ubike izero ze-Zika.
Ibhalansi engaphazamiseki yemvelo ivumela izilwane ezidla ezinye zemvelo (ama-gekko, ama-iguana, ama-oppossums, njll) ukuthi zithumele izinambuzane ezimbalwa ezihlala kule ndawo [2,800'], kuhlanganise nomiyane abaningi.
*Isibuyekezo se-ZIKA*: https://www.iamat.org/country/costa-rica/risk/zika-virus
Abanikazi bahlala unyaka wonke komunye umuzi endaweni (Pica Flora).
ICosta Rica inenani eliphansi lobugebengu eMelika Ephakathi (cishe izinga lobugebengu obufanayo neBoston). I-Atenas inezinga lobugebengu eliphansi kakhulu e-Costa Rica futhi i-Pica Flora inezinga lobugebengu eliphansi kakhulu e-Atenas. Noma kunjalo, kukhona isango lokuphepha elizenzakalelayo kanye nomakhelwane abanobungane, abathembisene ukuphepha okwengeziwe.
4.94 · 100 okushiwo abanye
Sihlala unyaka wonke kude namamitha angu-400 futhi siqapha i-imeyili ngakho-ke uma unezinkinga noma udinga amathiphu, siyajabula ukudlula sikusize. Siphinde sibe noWhatsapp, njengoba kwenza abantu abaningi baseCosta Rica (Ticos).
UCharlie/Gloria Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, 日本語, Español